BBQ Prawn and creamy avocado soup (ပုဇွန်ကင် နှင့် ထောပတ်သီး ခရင်ဟင်းရည် )
ထောပတ်သီး ၁ လုံး (အသားများထုပ်ထားပါ)
Avocado 1 no (take out all the flesh)
ပုဇွန်ထုပ် ၃ ကောင် (ခေါင်းနဲ့ အခွံတွေကိုဖယ်ထားပါ)
King prawn3no (take out shell and head)
Cajun မှုန့် ၁ ဇွန်း ခွဲ လက်ဖက်ဇွန်း (ပုဇွန်သားများ နယ်ရန်)
Cajun powder 1 ½ tsp (marinate prawn meat)
သံလွင်ဆီ ၁ ဇွန်း စား ပွဲဇွန်း
ကြက်သွန်နီ ၁ လုံး (ခတ်ကြမ်းကြမ်းလေးလှီးထားပါ)
Onion 1 no (roughly chopped)
နွားနို့ ၁ ခွက်
ချီစ် ၃ ဇွန်း စားပွဲဇွန်း (စားခံနည်းမှ အပေါ်မှအနည်းဖြူးစားရန်)
Cheese3tbsp (garnish)
ကြက်ပြုတ်ရည် ၂ ခွက် ခွဲ
Chicken Stock2½ cup
ပုဇွန် နယ်နှပ်ကင်ရန် ပြုလုပ်နည်း (Method Marinating and BBQ Prawn)
၁။ ဖန်ဇလုံကြီးထဲ ပုဇွန်အသားများ နှင့် ဆီ တစ်ဝက်ဇွန်း စားပွဲဇွန်း၊ Cajun မှုန့် ထည့်ပြီး သေချာ နယ်နှပ်ထားပါ။
1. Inabig glass bowl add prawn meat, oil, and Cajun powder mix well.
၂။ အာဗင် ကို အပူချိန် ၂၀၀ ဒီဂရီလောက် ပေးထားပါ။ (မီးသွေးနှင့် ကင်မည်ဆိုလျင် မီးသွေးခဲများ မီးကောင်းကောင်းဆွဲမှ ကင်ပါ)
2. Heat the oven to 200°. (Cooking with charcoal make sure charcoal are well high heat before you bbq)
၃။ အာဗင်ထဲ မှာ ၅-၈ မိနစ်လောက် ကင်ပါ၊ အရောင်တက်လာလျင် လှည့်ပေးပြီး ၂ မိနစ်လောက် ထပ်ကင်ပါ။
5. Bake chicken for 5-8 minute until the color is right. Turn other side and bake for2minute.
ထောပတ်သီး ဟင်ရည် ပြုလုပ်နည်း (Method Avocado Soup)
၁။ စောက်နက်အိုးထဲ ကျန်ဆီထည့်ပြီး အပူပေးပါ။ ဆီပူလျင် ကြက်သွန်နီ အိုးကင်းတိုက်ပါ။ ကြက်သွန်နီ နုးအိလာလျင် ပုဇွန်ခေါင်း အခွံ နှင့် ကြက်ပြုတ်ရေ ဆူအောင်တည်ပါ။
1.Heat the oil inalarge pan. Add onion and sauté until onion is soft. Add prawn head and shell and chicken stock. Cook until boil.
၂။ အိုးထဲမှ ပုဇွန် အခွံနှင့် ခေါင်းများ ဖယ် ပြစ် လိုက်ပါ။ အရည်အိုးထဲ ချီစ် ကလွဲလို့ ပါဝင်ပစ္စည်းများ အားလုံးထည့်ပြီးတည်ပါ။ ပွတ်ပွတ် ဆူလာလျင် မီးပိတ်ပြီး ဆားမြည်းပါ၊လိုတာထပ်ဖြည့်ပါ။ သုံးဆောင်မည့်ပုကန်ထဲ ထောပတ်သီးဟင်းရည် ထည့်ပါ ပုဇွန်ကင် အသားထည့်ပါ၊ ချီစ်ဖြူးပြီး သုံးဆောင်လို့ရပါပြီး။
2.Take out prawn head and shell from the pan. Add in all other ingredients accept for cheese. Cook until boil and turn off the heat. Taste and add anything needed. Serve with prawn meat and sprinkle with some cheese.
Boneless Eel Curry (ငါးရှဥ့်အရိုးပျောက်)
Chicken & Pepperoni Gumbo (ကြက်သား နှင့် ပက်ပရိုးနီး ဝက်အူချောင်း ဂန်ဘိုဟင်း)
Chilli stuffed with mutton and cheese in tomato sauce
Coconut Rice with Grilled Chicken and Vegetables
Creamy Corn & Crab with Garlic Crotons (ပြောင်းဖူးဂဏန်းနို့နှစ်ဟင်းချို နှင့်ကြက်သွန်ဖြူပေါင်မုန့်ကြွပ်)
Crispy Chili Crab (ဂဏန်းပျော့ အကြွတ်ကြော်ချဉ်စပ်)
Devil Curry Chicken (ဒီဗဲကာရီ – ကြက်သားအာလူး နှင့် ဝက်အူချောင်းအစပ်ဟင်း)
Fetuccine Pasta in Bolognese Sauce
Fried Coconut Chicken (အုန်းနို့ ကြက်ကြော်)
Giant Meatball Pasta (အမဲသားလုံး ပါစတာ)
Green Apple with Pork Sausage Salad
Lemon Butter Sesame Wrapped Salmon
Milk Jam (နွားနို့ယို)
Pork Loin Zurich Style
Pork Tenderloin with Peach and Raspberry (ဝက်သား မက်မွန်သီးချက်)
Salmon Steak on sautéed Leek, colorful Vegetable, in fresh Dill Sauce
Saucy Salami and Beans
Spaghetti Pasta with Pesto
Spanish Ox’s Tail Stew
Spiced Pork Tenderloin & Potato in Tomato Sauce (ဝက်သား နှင့် အာလူး မဆလာချဉ်စပ်)
Spinach and Egg Grilled Pizza (ဟင်းနုနွယ် နှင့် ကြက်ဥပီဇာကင်)
Spirals Pasta with Chicken Meat ball (ပါစတာအလိမ် နှင့် ကြက်သားလုံး)
US Raisin & Prunes in Pork Loin with Kachin Walnuts, Eryngi Mushrooms and Creamy Mashed Potatoes, Vichy Vegetables
ဘဲသားအချိုကင် နှင့် ခေါက်ဆွဲပြုတ်
မီနီ ကာလာဖူး ပီဇာ
ရနံ့မွှေးကြက်၊ ဝက်၊ ပုစွန်အရောသုပ်
ရှယ် ဝက်သားမျှင် ငရုတ်ပွ
သီးရွက်စုံ နှင့် ၀က်အူချောင်း ထမင်းကြော်
၀က်သား အကြွပ်ကြော် နှင့် မရိုနိစ်